သမိုင်းကြောင်းနှင့် အမွေအနှစ် - BRAND'S
သမိုင်းကြောင်း နှင့် အမွေအနှစ်
ဒေသဆိုင်ရာ နှစ်အလိုက် သမိုင်းကြောင်း
၁၉ ရာစုအစတွင် စတုတ္ထမြောက် George ဘုရင်၏ ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေးကြောင့် တော်ဝင်စားဖိုမှူး H.W. Brand သည် မင်းကြီး၏ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ကြက်ပေါင်းရည်တစ်မျိုး ဖန်တီး တိုက်ကျွေးလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
Mr. Brand သည် တော်ဝင်စားဖိုဆောင်မှ ၁၈၃၅ ခုနှစ်တွင် အနားယူပြီးနောက် BRAND’S® ကြက်ပေါင်းရည်ကို နလန်ထစနှင့် လူမမာများအတွက် အာဟာရတစ်ခုအဖြစ် စီးပွားဖြစ်ရောင်းချရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှအင်ပါယာတွင် နာမည်ကျော်သည့် BRAND’S® ကြက်ပေါင်းရည်သည် အရှေ့ဖျားဒေသသို့ ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ရောက်ရှိခဲ့ကာ ထိုမှစပြီး အာရှတစ်ခွင်လုံး နာမည်ရလာပါတော့သည်။
ပြည့်ဝသော အာဟာရဓာတ်ကို ပေးစွမ်းမှုကြောင့် BRAND’S® ကြက်ပေါင်းရည်သည် ထိုအချိန်မှစတင်ကာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဗူးပေါင်း သန်း ၁၅၀ ကျော် ရောင်းချထားရကာ အိုလံပစ်အဆင့် ရေကူးပြိုင်ပွဲများမှ ရေကူးကန်ပေါင်း ၂၆၅၀ ရှိ ရေများထက် များပြားသည့် အရေအတွက်ဖြစ်သည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် BRAND’S® ငှက်သိုက်ကို စတင်မိတ်ဆက်ရင်း BRAND’S® သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ငှက်သိုက် ပုလင်းကို တီထွင်ကာ တရုတ် ရိုးရာ အစားအစာတစ်မျိုးကို စားသုံးရလွယ်ကူအောင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ BRAND’S® ငှက်သိုက်ကို ဆိုးဆေး၊ အနံ့အရသာဆေးနှင့် ကြာရှည်ခံဆေးများ မပါသော ရိုးရာနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။
BRAND’S® ကြက်ပေါင်းရည် Herbal Range ကို စတင်ထုတ်လုပ်သည်။
ပထမဆုံး သစ်သီးမှထုတ်ယူသည့်အနှစ်ဖြင့် BRAND’S® Veta ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စတင်ရောင်းချသည်။
BRAND’S® ၏ ပထမဆုံး ပြတိုက်ကို တိုင်ဝမ်တွင် ဖွင့်လှစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ကာ ယခုအခါ အာရှမှ BRAND’S® ၏ အကြီးမားဆုံး ကျန်းမာရေးပြတိုက်ဖြစ်လာပါသည်။
BRAND’S® ကြက်ပေါင်းရည် အမျိုးအစားများနှင့်အတူ BRAND’S® ကျန်းမာရေးအားဖြည့်ဆေးပြား စတင်ထုတ်လုပ်သည်။
BRAND’S® ၏ သိပ္ပံပညာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် သုတေသနတို့ဖြင့် BRAND’S® InnerShine® ကို ထုတ်လုပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ သဘာဝမှ အကောင်းဆုံး ပါဝင်ပစ္စည်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိရှိကာ အမျိုးသမီးများအား ထိပ်တန်း ကျန်းမာရေး အားဖြည့်အာဟာရဖြင့် အလှအပကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။
BRAND’S® က ၎င်း၏ ဘူးထဲထည့်ပြီး ထုတ်လုပ်သည့် အဓိက ထုတ်ကုန်များအတွက် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဖြစ်သည့် သုံးဆင့် လုံခြုံရေးစနစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
BRAND’S® ကြက်ပေါင်းရည်၏ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေနှင့် နိုင်ငံတကာ ဇီဝကမ္မ မနုဿဗေဒ ဒီဇိုင်း ဆု ရွေးချယ်ရေး နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့က BRAND’S® ကို Grand Prize ချီးမြှင့်သည်။
BRAND’S® က ၁၇၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ဒေသတွင်းမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျင်းပသည်။ “ပုလင်းထဲက မျှော်လင့်ချက် (Hope In A Bottle)” စီမံကိန်းကို စတင်ကာ BRAND’S® သည် ယင်း၏ ဘူးများကို ပြန်သုံးရင်း ထိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ဆင်းရဲသားများ၏ အိမ်များ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ဖန်တီးပေးသည်။
BRAND’S® ရွှေ ငှက်သိုက် စားတော်ပွဲကို ဟောင်ကောင်နှင့် စင်ကာပူတွင် BRAND’S® ရွှေငှက်သိုက် သုံးပြီး ကျင်းပကာ အလွန် စွဲမက်အရသာရှိသော စားသောက်ဖွယ်များကို ထိပ်တန်း စားဖိုမှူးများက စီမံ ချက်ပြုတ်သည်။
ထိုနှစ်မှာပင် BRAND’S® ဦးနှောက် သုတေသနစင်တာကို စင်ကာပူမှာ ဖွင့်လှစ်ကာ BRAND’S® ဇီဝ ဒြပ်ပေါင်းများ၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးပြုမှုကို လေ့လာသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် BRAND’S® က တိုးပွားလာသော စားသုံးသူလိုအပ်ချက်ကို ပံ့ပိုးနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ငှက်သိုက်ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Pinthong Industrial Estate တွင် တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
1087 စတုရန်းမီတာကျယ် BRAND’S® Discovery Centre ပြတိုက်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ Pinthong Industrial Estate တွင် ဖွင့်လှစ်ကာ ကုမ္ပဏီ၏ အမွေအနှစ်၊ ထုတ်ကုန် သမိုင်းကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နည်းပညာတို့ကို ပြသထားသည်။ လူထုကိုရော ကုမ္ပဏီ ဧည့်သည်များအတွက်ပါ ဖွင့်လှစ်သော BRAND'S® Discovery Centre တွင် လက်တွေ့အခြေခံသော နယ်ပယ် သုံးခု ပါဝင်ကာ BRAND'S® ကြက်ပေါင်းရည်၊ BRAND'S® ငှက်သိုက်နှင့် BRAND'S® Veta® အမျိုးအစားများ၏ အမှတ်တရများကို ပြသထားပါသည်။